Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.4.1 agụta ihe
Simple agụta nwere ike ịbụ na-akpali ọ bụrụ na ị na ikpokọta a ezigbo ajụjụ ezi data.
Ọ bụ ezie na ọ na-makpuru na ọkaibe sounding asụsụ, nza nke na-elekọta mmadụ nnyocha na-n'ezie nnọọ agụta ihe. Na afọ nke nnukwu data, na-eme nnyocha nwere ike ịgụ karịa mgbe ọ bụla, ma na ọ pụtaghị na nnyocha a ga-elekwasị anya na-agụta ihe na ọzọ stof. Kama nke ahụ, ọ bụrụ na anyị na-aga ime ihe ọma nnyocha na nnukwu data, anyị kwesịrị ịjụ bụ: Olee ihe dị oké ọnụ ahịa na-agụta? Nke a nwere ike iyi ka ihe kpamkpam nke onye okwu, ma e nwere ụfọdụ n'ozuzu ihe nakawa etu esi.
Ọtụtụ mgbe ụmụ akwụkwọ ịkpali ha agụta research, sị: M na-aga ịgụ ihe na ọ dịtụbeghị onye guru n'ihu. Dị ka ihe atụ, a na-amụrụ pụrụ ikwu, ọtụtụ ndị na-amụ ekupụ ma ọtụtụ ndị na-amụ ejima, ma ọ dịghị onye na-amụ ná mba ọzọ ejima. Akpali site anọghị adịghị na-emekarị ịkpata ezigbo nnyocha. N'ezie, e nwere ike inwe ezi ihe mere na-amụ ná mba ọzọ ejima, ma eziokwu na ọ dịghị ebe ha na-amụ tupu apụtaghị na ha ga-amụ ugbu a. O nweghị onye ya gua ọnu-ọgugu eri na kapeeti na m ọrụ, ma nke ahụ adịghị na-akpaghị aka na-enye echiche na nke a ga-abụ ezigbo nnyocha. Akpali site anọghị bụ ụdị dị ka sị: anya, e nwere ihe a oghere n'ebe ahụ, na m na-aga arụsi ọrụ ike iji ju ya elu. Ma, ọ bụghị ọ bụla oghere kwesịrị ka a jupụtara.
Kama akpali akpali site na-anọghị, m na-eche na-agụta na-eduga mma nnyocha na ọnọdụ abụọ, mgbe research bụ na-akpali ma ọ bụ mkpa (ma ọ bụ kwesịrị ma). Dị ka ihe atụ, atụ ọnụego nke na-enweghị ọrụ bụ ihe dị mkpa n'ihi na ọ bụ egosi na ụba na-akpali iwu mkpebi. N'ozuzu, ndị mmadụ nwere a mara ezigbo mma echiche nke ihe dị mkpa. Ya mere, na ndị fọdụrụ nke nkebi a, m na-aga na-enye ihe atụ atọ ebe agụta bụ na-akpali. Na nke ọ bụla, ndị na-eme nnyocha na-adịghị agụta haphazardly, kama ha na-agụta na nnọọ akpan akpan ntọala nke kpughere mkpa omimi karị n'ozuzu echiche banyere otú na-elekọta mmadụ na usoro ọrụ. Ndị ọzọ okwu, a otutu ihe na-eme ndị a akpan akpan ibat nn omume na-akpali adịghị na data onwe ya, ọ na-abịa site na ndị a ihe n'ozuzu echiche.
N'okpuru ebe m ga-ewetara ihe atụ atọ na: 1) na-arụ ọrụ omume nke taxi ọkwọ ụgbọala na New York (Nkebi 2.4.1.1), 2) enyi guzobere site ụmụ akwụkwọ (Nkebi 2.4.1.2) na 3)-elekọta mmadụ media nnyocha omume nke Chinese ọchịchị (Nkebi 2.4.1.3). Ihe atụ ndị a ịkọrọ bụ na ha niile na-egosi na-agụta nnukwu data nwere ike iji nwalee usoro iwu amụma. Mgbe ụfọdụ, nnukwu data isi mmalite eme ka i nwee ike ime nke a agụta dịtụ ozugbo (dị ka na ihe banyere New York Tagzi). N'ọnọdụ ndị ọzọ, na-eme nnyocha ga-mkpa obibi incompleteness site merging data ọnụ na operationalizing usoro iwu chepụtara (dị ka na ihe banyere ọbụbụenyi guzobere); na ụfọdụ na-eme nnyocha ga-mkpa na-anakọta ha onwe ha observational data (dị ka na ihe banyere mmadụ mgbasa ozi nnyocha). Dị ka m nwere olileanya na ihe atụ ndị a na-egosi, n'ihi na-eme nnyocha bụ ndị nwere ike ịjụ akpali ajụjụ, nnukwu data esetịpụ oké nkwa.